Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Costa Rica dia manampy ny mpifindrafindra nomerika hanitatra ny fotoana ijanonany
Costa Rica dia lasa toerana mety indrindra ho an'ireo vahiny misafidy ny hiasa lavitra
Ireo nomadera nomerika avy any Etazonia, Chile ary Portugal dia manasongadina ny tombony azo amin'ny fiainana sy ny fiasana avy any Costa Rica
Notononin'izy ireo ny hatsaran-tarehy voajanahary, ny “fanomezana an'ny olony” ary ny fitantanana avo lenta ny firenena amin'ny areti-mifindra manohitra COVID-19
Ny fijanonany dia amam-bolana ary ny sasany manampy taona iray hafa, noho ny fanitarana nomen'ny Migration and Foreigners
Costa Rica dia lasa toerana mety indrindra ho an'ireo vahiny misafidy ny hiasa lavitra. Ny firenena, hoy izy ireo, dia manome azy ireo fitantanana sahaza ny areti-mifindra sy ny mety hanambatra ny asan'ny firenena onenan'izy ireo amin'ny kilasy surf, fitsangatsanganana any an-tendrombohitra sy Pura Vida.
Ireo mpifindra monina nomerika avy any Silia, Etazonia ary Portugal dia niaina sy niasa - ny sasany nandritra ny volana maro ary tamin'ny tranga hafa nandritra ny herintaona - any amin'ny faritra toa an'i Jacó, Manuel Antonio, Santa Teresa de Cóbano ary Monteverde, ankoatry ny hafa.
Ity traikefa ity dia mety hanintona olona maro kokoa izay tsy miankina amin'ny toerana voafetra sy mampiasa teknolojia hanatanterahana ny asany, satria ny solombavambahoakan'ny Antenimiera mpanao lalàna dia mandinika ny tetik'asa No. 22215: lalàna hisarihana ireo mpiasa sy mpamatsy tolotra ho an'ny firenena serivisy lavitra amin'ny natiora iraisam-pirenena.
Ny Portigey Viviana Gomes Lope, talen'ny fitantanam-bola sy paikady amin'ny consultant any Mexico, dia mieritreritra fa raha tianao ny fitetezana surf sy ny natiora, Costa Rica no toerana mety indrindra.
"Amin'ny firenena voalohany dia firenena tsy mampino izy io," hoy i Gomes Lope, izay nipetraka tany Santa Teresa. "Nifehy tsara ny valanaretina izy ireo, iray amin'ireo antony lehibe nahatonga ahy hijanona fa tsy handeha any Mexico City, tanàna fonenako," hoy izy nanampy.
Tonga tany Costa Rica i Gomes Lope tamin'ny febroary 2020 nijanona telo herinandro. Gaga tampoka teo amin'ny tany Costa Rican ity areti-mandringana ity ary nanitatra ny fijanonany tany Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, raha mbola nomena alalana ara-dalàna izy. Avy any dia natambatra ny asany matihanina tamin'ny lesona momba ny surf. Ny nofinofiny dia ny tsy hiverina any Costa Rica.
“Ireo mpizahatany izay mijanona mandritra ny fotoana lava dia manome ny volany bebe kokoa amin'ny rojom-bidy ateraky ny fizahan-tany, satria manao fividianana eo an-toerana bebe kokoa izy ireo, manofa fiara mandritra ny herinandro na volana maromaro, mampiasa serivisy toa ny salon hatsaran-tarehy, fivarotana lehibe, trano fisakafoanana, soda, fanasan-damba, zava-mahadomelina, serivisy fitsaboana, ankoatry ny orinasa hafa eo amin'ny fiarahamonina, noho izany ny maha-zava-dehibe ny fividianana mpiasa lavitra, "hoy i Gustavo Segura Sancho, minisitry ny fizahan-tany.
Noraisin'ny hatsaran-toetra etika Costa Rica
Raha nankatoavina tao amin'ny Antenimieram-panorenana ny volavolan-dalàna, ny mpiasa lavitra dia mahazo fahazoan-dàlana hijanona mandritra ny herintaona ao amin'ny firenena, afaka maharitra iray taona, dia azon'izy ireo atao ny manokatra kaonty amin'ny banky sy mampiasa ny fahazoan-dàlan'ny mpamily any amin'ny fireneny. , ankoatry ny hafa.
"Amin'ny toe-javatra misy ankehitriny, izay mety hitatra hatramin'ny telo taona ny fanarenana ny fizahan-tany alohan'ny hamerenana ny fangatahana mialoha ny pandemika, ny ampahan'ny nomads nomerika dia lakilen'ny famerenan'ny sehatra, filokana izay ananan'ireo toerana hafa eto amin'izao tontolo izao tontolo efa mandroso ”, hoy ny minisitra Segura.
Ho an'ny anjarany, Megan Kennedy, lehiben'ny biraon'ny firenena orinasa Selina any Costa Rica, dia nanazava fa ny foto-kevitry ny nomad nomerika dia anisan'ity gadona ity hatramin'ny nanombohany, satria nanana faritra ampy fitaovana sy asa ampy foana izy ireo Ny fahafahan'ny fifandraisana Wi-Fi, izay nahafahan'izy ireo miaina fitomboan'ny isan'ireo vahiny manerantany izay tonga miasa lavitra avy amin'ny tanin'i Costa Rican.
“Manamafy ny hafainganam-pandehan'ny Internet izahay, mamorona toerana tsy miankina maro hiantsoana asa, ary koa faritra iaraha-miasa. Mazava ny tombony ho an'i Costa Rica satria ho avy hipetraka eto ny olona, ​​hividy ny sakafony, ny fitafiany, hanofa fiara, handray anjara amin'ny toekarena nefa mbola hiasa, ”hoy i Kennedy.
“Mahafinaritra ny fitsangantsanganana ny morontsiraka, mahatalanjona ny fitsaboana am-pitiavana ny olona amin'ny tanàna rehetra, nanaitra ahy ny toetrandro, ary koa ny natiora sy ny valan-javaboary. Costa Rica dia mety raha hiasa lavitra, "hoy i Raúl Reeves, mpandraharaha Shiliana ary mpifindrafindra nomerika, izay nanomboka tamin'ny volana Janoary no nanararaotra ny fijanonany mba hankafizana ireo toerana toa an'i Jacó, Nosara, Tamarindo, Santa Teresa ary Monteverde vao tsy ela akory izay.
Tranga tsy fahita firy an'ny karazana COVID-2 vaovao any Italia